Toamasina Nigrevy ireo mararin’ny Covid-19
Nanao hetsika ireo olona mararin’ny coronavirus tazonina ao amin’ny CEFTAR Analamalotra sy CRJS, ary Foyer Canada ao Toamasina omaly. Efa nivoaka ny trano nisy azy niaraka tamin’ny entana mihitsy ireo tao amin’ny CRJS.
Antsasak’ireo olona no efa miandry ny valin’ny fitiliana azy ireo taorian’ny fanarahana fitsaboana ho an’ny ao Analamalotra. Tsy mivaly ny fitiliana, ny fandraisana an-tànana sy ny sakafo tsizarizary, laisoa foana no hoanina,... Misy efa folo andro miandry ny “contre-test”, ao ny efa 21 andro. “kidnapping médical” no mahazo anay fa tsy resaka fitsaboana intsony, hoy ireo marary. Mitambatra ny marary vaovao sy ny miandry valina fitiliana farany, araka ny fitarainana. Misy ny mivaky fa tsy misy fanafody. Misy zazakely an-tànana tsy mbola nivaly ny fitiliana. Lazaina fa maditra i Toamasina, kanefa tsy izahay no maditra fa ny fandrindrana ataon’izy ireo no misavoritaka tanteraka, hoy ireo marary. Ny mpitandro filaminana no niditra an-tsehatra nandamina sy nanakana ireo olona. Nihaona tamin’ireo marary ny Governoran’ny Atsinanana Atoa Rafidison Richard, izay nanaiky fa nisy ny fahatarana noho ny fahamaroan’ny fitiliana manerana ny Nosy. Omaly tontolo dia ny fitiliana natao tany Toamasina no iandraketana noho ny fiangaviana natao. Marina fa efa nahavita fitsaboana, saingy tsy afaka mivoaka, raha tsy azo ny valin’ny fitiliana, hoy izy. Tsy latsaky ny 100 ny valina fitiliana ho an’i Toamasina izay ao anaty fotoana fohy, araka ny fanazavany. Alefaso eny amin’’ireo toerana hanibohana ireo olona ireo ny laboratoire mobile, izay mahavita fitiliana ao anatin’ny 24 ora. Nahoana no mbola alefa any Antananarivo ny singa? Hoy kosa ny depiote Roland Ratsiraka, izay tonga nandamina ny marary.